FBC - Rakkoo piroojaktoota bishaanii Naannoo Oromiyaatti waggoota hedduuf lafarra harkifatan 34 furuuf hojjataan jira: Biirucha
Rakkoo piroojaktoota bishaanii Naannoo Oromiyaatti waggoota hedduuf lafarra harkifatan 34 furuuf hojjataan jira: Biirucha
Finfinnee, sadaasa 12, 2010 (FBC) Rakkoo 'piroojaktoota' bishaanii Naannoo Oromiyaa godinaalee gara-garaa keessaa waggoota hedduuf lafarra harkifatan 34 furuuf hojjataa akka jiru Biiroon Bishaanii, Albuudaa fi ‘Inarjii’ naannichaa ibse.
Sagalee komii rakkoo dhiheessii bishaan dhugaatii kannenii Naannoo Oromiyaa iddoowwan gara-garaatti ka’aa kan turanidha.
Faanaa Biroodkaastiing Korporeetis komiiwwan rakkoo bishaan dhugaatii iddoowwan gara-garaa naannittiitti ka’an kana bu’uureffachuun maaliif furamuu hin-dandeenye kan jedhuun irra deddeebi’un yeroo hedduuf gaafatus rakkooleen kunniin hanga har’aatti hin-furamne.
Baroota hedduuf osoo hin-xumuramin kan hafan, tajaajila jalqabanii sababa cabuun suphaa malee piroojaktoonni waggoota hedduuf taa’an madda komii uummatichaa ta’anii turaniiru.
Jiraattonni godinaa fi magaalaa rakkoo kanaaf saaxilaman rakkinichi yeroo dheeraa kan lakkoofsisee fi ammas ta’u kan hin-furamne ta’uu kaasaniiru.
Pireezdaantiin naannittii Obbo Lammaa Magarsaa qaamolee hawaasaa gara-garaa waliin wayita mari’atan rakkoon bishaan dhugaatii hirmaattota irraa ka’u sirrii ta’uusaa himaniiru.
Rakkinni kun kan mudate damichaan hojjatamuu hafee osoo hin-taane hanqinni faayinaansii waan jiruuf ta’uu kaasu.
'Piroojaktoota' bara 2009 dura jalqabamanii hin-xumuramne xumuruuf fi waliin ga’uuf xiyyeeffannoon hojjatamaa jira jedhaniiru.
Biiroon Bishaanii, Albuudaa fi ‘Inarjii’ naannichaatti Itti-aanaan Hogganaa Damee Bishaan Dhugaatii Obbo Gazaahiny Lammeechaa akka jedhanitti humni ‘kontiraaktarootaa’ murtaa’aa ta’uudhaa jalqabee rakkoon dhiheessii galtee ‘dizaayinaa’ fi ijaarsaa piroojaktoonni’ kunniin lafarra akka harkifataniif sababadha.
‘Piroojaktoonni’ tokko tokko osoo hin-xumutramin waggaa 8 hanga 10 turuu isaanii kan himan itti-aanaa hogganaan kun, baay’inni isaanii 34 akka ga’uu fi saffisa danda’ameen bara bajataa kana xumuruuf akka hojjatamu himaniiru.
‘Piroojaktichi’ aanaadhaa aanaatti, gandaa gandatti kan wal-argan yoo ta’u, piroojaktii misoomaa fi damee bishaan dhugaatii magaalaa kan jedhuun adda qoqqodamanii hojjatamaa kan jiran ta’uu eerameera.
Kanneen harkifatan keessaa baatiiwwan afur darbanitti ‘piroojaktoonni’ uummatichaa tajaajila akka kennan taasifaman jiraachu isaanii eerameera.
‘Piroojaktoota’ baay’ee harkifatan keessaa ‘piroojaktiin’ bishaan dhugaatii Gimbii rakkoo murtaa’e qabaatus, tajaajila kennuu jalqabuusaa itti-aanaa hogganaan kun himaniiru.
Kan Mattuu, Anjleloo Gonnesaa fi ‘piroojaktoonni’ kaan xumuramanii tajaajila jalqabaniiru jedhaniiru.
Biiruchi ‘piroojaktoota’ turaniif dursa kennee hojjataa kan jiru yoo ta’u, iddoowwan murtaa’etti sararichi diriirfamee yeroo dheeraa waan tureef bishaan wayita gadhiifamutti rakkkoon dhohuu mudachaa kan jiru ta’uu kaasaniiru.
Keessumaa ‘piroojaktoonni’ bishaan dhugaatii Gimbii fi Baatuu rakkoo kanaaf saaxilamuusaanii ibsaniiru.
Bara bajatichaatti magaalaatti 18 fi baadiyyaatti 36 walumaagalatti ‘piroojaktoota’ bishaanii 54 hojjachuuf karoorri qabamee hojjatamaa jira jedhameera.
Harkifannaan kana dura mudate akka hin-mudannee fi ‘piroojaktichi’ dafee xumuramee fayyadamaa akka qaqqabu hojimaata haaraa akka hordofan Itti-aanaa Hogganaan Obbo Gazaahiny himaniiru.
Biiruchi harkifannaa kana dura ture hambisuuf fi gaaffii hawaasaa deebisuuf ijaarsa isaas ta’e dhiheessii mi’aa ‘kontiraaktaroota’ injifatanitti kennuun akka hojjachiisu beeksiseera.
Ijaarsi ‘piroojaktoota’ bishaan dhugaatii qulqulluu harkifatanii saffisa danda’ameen bara bajataa kanatti akka xumuraman hojjatamaa kan jiru yoo ta’u, yeroo ijaarsaa piroojaktoota’ haaraa hojjatamanii waggaa tokkoo fi walakkaa akka fudhatu eerameera.
Biiruchi ‘piroojaktoota’ turanii fi haaraa ijaaramaniif bajata Birrii biliyoona 1.7 ol ramadeera. Sarkaalam Geetaachootu gabaase.
Oduuwwan Biroo « Biyyattiin bu’aa olaanaa ‘invastimantii’ hawwachuun galmeessisteef sadarkaa idil-addunyaatti badhaafamte	‘Ministirri’ Muummee Haayilamaariyaam ‘Pireezdaantii’ Puunt Land Andiweelii Mohaammad Alii waliin mari’atan »